အောက်ဖော်ပြပါများမှာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု၊ တရားစွဲဆိုမှုဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုများကိုပေးသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်မှုများဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည် နှိုင်းယှဉ်ဇယား ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကမ်းလွန် LLC များအတွက်။
နေးဗစ် - သီးသန့်တည်ရှိမှု၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု။ နီဗစ်ကျွန်းသည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတရားစီရင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလေ့လာပါ။ ထို့ထက်ကား၊ အင်အားအကောင်းဆုံးကမ်းလွန် tool ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ: အ Nevis LLC မှ.
belize - ကုမ္ပဏီများ၊ IBC (International Business Company) နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများ။ ထို့အပြင် Belize သည်ကမ်းလွန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးနှင့်ကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘီလီဇ် LDC, ဘီလီဇ်၏ LLC မှအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသည်ထူးခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုအကျိုးအမြတ်အချို့ကိုပေးသည်။
ဘဟားမား - အခွန်လွတ်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ထို့အပြင် Bahamas ရှိသင်ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
British Virgin Islands - အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု။ BVI ရှိ IBC နှင့် IBC ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုမည်သို့ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ ထိုကဲ့သို့သောကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ (LLCs) အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည် နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏ပြင်ပတွင်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဘဏ္privacyာရေးဆိုင်ရာသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အခါအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သူများ။ ထို့အပြင်အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များသည်အကျဉ်းချုပ် ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကိုဖွဲ့စည်းတာလဲ။
ဒီနေရာတွင်သင်သည်ကမ်းလွန်ရေနံစာရင်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမဟာဗျူဟာများသူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်။ ထို့အပြင်ဤအခန်းတွင်ကုမ္ပဏီများ၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ ၎င်းတို့မည်သို့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဘယ်ကြောင့်အပါအဝင်ကမ်းလွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကဏ္aspectsများကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ ကမ်းလွန်ဘဏ် ဒီမှာ။
ပထမဦးစွာ များစွာသောကမ်းလွန်တရားစီရင်မှု ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘဏ္privacyာရေး privacy ကိုရှာသောသူတို့အဘို့အအလွန်အမင်းအကျိုးရှိဥပဒေရေးရာစနစ်များရှိသည်။ ဒီအချက်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်အချက်အလက်များ။ အထူးသ, ထို ယူအက်စ်တွင်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၄.၄% ရှိပြီးကမ္ဘာ့ရှေ့နေ ၇၀% နှင့်ကမ္ဘာ့တရားစွဲဆိုမှု ၉၆% ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာရှုံးနိမ့်သူတစ် ဦး မှဥပဒေရေးရာစနစ်ကိုမပေးပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်တရားစွဲဆိုမှုရှုံးနိမ့်သူသည်သူ၏ရှေ့နေအခကြေးငွေနှင့်ပြိုင်ဘက်များကိုပါပေးဆပ်ရသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဥပဒေများကတရားစွဲမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ = မိကျောင်းနှင့်အတူကျုံး
ယူအက်စ်တွင်သင်သည်တရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးအနိုင်ရပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်များကျန်နေဆဲဖြစ်သည်ဒါဆိုသင်ဆုံးရှုံးနေတုန်းပဲ သို့သော်ငြားလည်း, ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားတရားစွဲခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင်တရား ၀ င်ပြိုင်ဘက်သည်သင်၏ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအားတရားစွဲဆိုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ သူသို့မဟုတ်သူမအမှုအားပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ရန်နှောင်ကြိုးတစ်ခုတင်ထားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည်အမှုအားတရားရုံးသို့ပင်ရောက်နိုင်မလားဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မကြာခဏငွေချေးစာချုပ်ပြန်အမ်းမရ။ ရလဒ်အနေနှင့်လူတော်တော်များများသည်တရားစွဲဆိုမှုများကိုမပြုလုပ်ကြပါ။ ဒါကြောင့်ဒါကတရားစွဲဆိုမှုကာကွယ်ရေးရဲ့အားကောင်းတဲ့အလွှာတစ်ခုပါ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်ကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရား ၀ င်ဥပဒေများကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းအားဖြင့်သင့်အားတရားစွဲဆိုသူတစ် ဦး ၏အခွင့်အရေးကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
နှင့် တစ် ဦး Nevis LLCဥပမာအားဖြင့်, 2015 ပြင်ဆင်ရေး တစ် ဦး $ 100,000 နှောင်ကြိုး post ဖို့ကြွေးရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သူတို့တစ်တွေတရားသဖြင့်စီရင်စုဆောင်းရန်မဆိုအရေးယူဆောင်ကြဉ်းနိုင်မီ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်။ Nevis မှဥပဒေပြုအမတ်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Nevis တရားရုံးများအားအနှောင်အဖွဲ့သတ်မှတ်ရန်အခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည် မည်သည့်ပမာဏမဆို။ သင်၏ဘဏ္finာရေးကိုမျက်လုံးများမှရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသောငွေများသည်တရားစွဲမှုများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲဆိုခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဘဏ္privacyာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့သည်ကမ်းလွန်လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာအနက်အချို့ဖြစ်သည်။ LLCs အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်ထူးတစ်ခုမှာကွတ်ခ်ကျွန်းစုဖြစ်သည်။ စကားမစပ်, သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ကွတ်ကျွန်းစု LLC vs. Nevis LLC ကြောင်းနှစ်ခုအဖွဲ့အစည်းများနှိုင်းယှဉ်။
နောက်ထပ်သော့ချက်အချက်မှာထိုအရာဖြစ်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုများစွာပေးသည် ပြည်တွင်း entity ထက် အမျိုးအစားများ။ ဥပမာများမှာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ တာဝန်ယူမှုအကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBCs) တို့ဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်၊ ကနေဒါသို့မဟုတ်ဗြိတိန်တို့ထက်ပိုမိုသောအခွင့်သာသောဥပဒေများရှိသည့်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများစွာရှိသည်။ ဤတရားစီရင်မှုများသည်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ privacy ကို, အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများအဘို့အ privacy ကိုနှင့်နိုင်ငံခြား၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုမပေး တရားစီရင်ပိုင်.
တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အားတရားစွဲဆိုမှုသည်အမှုအခင်းကြီးများဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ရှေ့နေများစွာသည်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အချို့သူတို့သည်တရားရုံး၏အတွင်းပိုင်းကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်တရား ၀ င်သောစနစ်ကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအားမကျေနပ်သောအခြေချနေထိုင်မှုများသို့ဖိအားပေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သည် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း သင်၏ကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များအားဖြင့်ကူညီနိုင်သည် OffshoreCompany.com သို့ခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ် by ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့စည်းသည် နှစ်စဉ်စီးပွားရေးအဆောက်အ ဦ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောင်နှင့်ချီသောအမေရိကန်များအား၎င်းတို့၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုလိုအပ်ချက်များကိုကူညီခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအားလုံးမှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း ပုံမှန်.
နောက်ဆုံးဇွန်လ 16, 2019 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်